Ingubo yezikhali ichazwa, eMthethweni We-Heraldry No. 18 ka-1962 waseNingizimu Afrika, njengalokhu into noma isibalo sibe umfanekiso ofanekisela imibala ngesihlangu ngokuhambisana nemigomo nemithetho ye-Heraldry, noma ngaphandle komqhele, isigqoko, isikhumba, ukugubha, abasekeli, isiqubulo noma ezinye izesekeli.
Indima Yesiphandla Sezikhali
Isifundazwe ngasinye sesishiyagalolunye saseNingizimu Afrika sinesiKhwama sazo seMpi esimele leso sifundazwe futhi siyisigungu esisemthethweni saleso sifundazwe. Ingubo yesiFundazwe yezikhali ibonakaliso ebonakalayo kakhulu esiFundazweni. Igunya eliphelele linikezwa kuwo wonke amadokhumenti ngombono we Uphawu olukhulu kulo. I-SouthAfrica.co.za inikezela incazelo ngayinye yeziFundazwe I-Coat of Arms kanye nencazelo yalokho okushiwo yizimpawu, kuzo zonke izilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni zaseNingizimu Afrika.
Imithetho Yesiphandla Sezikhali
Ayikho imingcele engadonselwa ezungeze i-Coat of Arms, noma izinguquko ekugqeni kwemigqa. Ingubo Yezikhali angeke ijikelezwe, ihlaselwe noma iphikisiwe. Ingubo yezikhali angeke ihambe noma ihlangane nezinye izinto. I-Coat of Arms esezingeni eliphakeme kufanele ihlale iboniswa njengento evelele kakhulu.
Isiphandla sezikhali sesifundazwe saseEastern Cape sanikezwa ngoMashi 25, 1996. Izingalo ziqala ngesisekelo esiluhlaza kanye nesiqubulo, UKUTHUTHUKISWA KUNYE UBUNYE....more
Inesisekelo esinezinto eziningi eziluhlaza okwesibhakabhaka, ama-browns nama-beiges abonisa umhlaba waseFree State. Isiqubulo esithi KATLEHO KA KOPANO - esibhalwe ngesiSuthu sisho ukuchuma ngobunye....more
Isihlangu sinobuhlaza okwesibhakabhaka, esimele umbala wengubo egqoke isikhulumi esiShayamthetho Esiphezulu. Ukuvezwa kwesihlangu igolide eline-pickaxe enemibala efanekisela ukuqala kwezimayini zegolide zesifundazwe kanye nokuxhumanisa negama lesifundazwe...more
Isifundazwe saKwaZulu-Natali silinde kuze kube ngu-2004 ngaphambi kokugunyaza i-Coat of Arms entsha. Ngesikhathi sokhetho lwezinsuku eziyishumi, uKwaZulu-Natali wasebenzisa izingalo ezivela eNatali naseKwaZulu, ezihlangene....more
Sisekelo seMKhonto weSive sase Limpopo simnyama nalokuluhlata nesisho – KUHLANGANA NGEKUTHULA KANYE NEMPHUMELELO, kubhalwe ngalokushona phansi lokumhlophe....more
sinesisekelo esiluhlaza ngezwi lesiLatini - i-OMNIA LABOR VINCIT - ebhalwe kulo, okusho ukuthi, "Umsebenzi unqoba konke". Ngaphezulu kwesisekelo yisihlangu esinomfanekiso we-Barberton daisy kuwo....more
Lona kuphela iChild of Arms kusuka kunoma yiziphi izifundazwe zaseNingizimu Afrika ezibhalwe ngokucacile ngemibala futhi ngandlela-thile izinhlobo zefulege kazwelonke, ezasetshenziswa ngo-27 Ephreli 1994....more
Lesi siqubulo sibhalwe phansi eNorthern Cape Coat of Arms, esinikezwe ngo-25 Agasti 1997. Isizinda sinobuciko obuningi emanzini asundu futhi sinomphumela we-3D, okumelela amathafa avulekile namadwala eNyakatho Kapa....more
Isiphandla sezikhali sesiFundazwe saseNshona kapa yamukelwa futhi yasungulwa yiPhalamende lesifundazwe ngo-1998....more